Izibhebhe ze-Atoris: yini esiza umuthi? > Imithi
I-Atoris: imiyalo yokusebenzisa, ama-analogues nokubuyekezwa, amanani entengo yemithi yaseRussia
I-Atorvastatin ngesinye sezidakamizwa ezisehlisa i-lipid eqenjini lama-statins. Indlela enkulu yokusebenza kungukuvimbela umsebenzi we-HMG-CoA reductase (i-enzyme ebanga ukuguqulwa kwe-HMG-CoA ibe yi-mevalonic acid). Lokhu kuguqulwa kungenye yezigaba zakuqala ekuxhumeni kokubumba ikholesterol emzimbeni. Lapho ukucubungula kwama-Chs kucindezelwa, kuba nokwanda okwenziwa ngama-LDL receptors (low density lipoproteins) esibindini nasezicutshini ezengeziwe. Ngemuva kokuthi izinhlayiya ze-LDL ziboshwe ama-receptors, zisuswa ku-plasma yegazi, okuholela ekunciphiseni kokuxineka kwe-LDL-C egazini.
Umphumela we-antiatherosclerotic we-atorvastatin uthuthuka njengomphumela womphumela wawo ezingxenyeni zegazi nasezindongeni zegazi legazi. I-Atorvastatin ivimbela ukwakheka kwama-isoprenoids, okuyizici zokukhula kwamangqamuzana okufakwa ngaphakathi kwemithambo yegazi. Ngenxa yomthelela womuthi, kukhona ukuthuthuka kokuncipha kokuncika kwemithambo yegazi, ukwehla kokuxineka kwe-LDL-C, Apo-B (apolipoprotein B) kanye ne-TG (triglycerides), ukwanda kokuxineka kwe-HDL-C (i-lip density lipoprotein ephezulu) ne-Apo-A (apolipoprotein A).
Umphumela wokwelapha we-atorvastatin ubonakaliswa ekunciphiseni kokubonakala kwe-plasma yegazi kanye nomsebenzi wezinto ezithile zokuhlanganiswa kweplatelet nezinto zokuqina. Ngenxa yalokhu, i-hemodynamics iyathuthuka futhi isimo sohlelo lokuqubuka sejwayelekile. I-HMG-CoA reductase inhibitors nayo ithinta ukusebenza kwe-macrophages, ivimba ukusebenza kwayo futhi ivimbele ukuqhuma kwezigxobo ze-atherosulinotic.
Ukuthuthukiswa komphumela wokwelapha kuyaphawulwa, njengomthetho, ngemuva kwamaviki ama-2 wokulashwa, kufinyelela isilinganiso sawo emavikini ama-4 okusebenzisa i-Atoris.
Ngokusetshenziswa kwe-80 mg ye-Atoris ngosuku, amathuba okuba nezinkinga ze-ischemic (kufaka phakathi ukufa okuvela kumthambo womoya ophansi) ancishiswa kakhulu ngo-16%, kanti ingozi yokuvuselelwa ngenxa ye-angina ehambisana nezimpawu ze-myocardial incishiswa ngo-26%.
I-Atorvastatin ine-ukumuncwa okuphezulu (cishe u-80% womthamo udonswa emthanjeni wesisu). Izinga lokufakwa kanye nokufakwa kwe-plasma ekukhuphukeni kwegazi ngokulingana nedosi. Isikhathi esimaphakathi sokufika ku-Cmax (ukuqoqwa okukhulu kwento) - kusuka emahoreni ayi-1 kuye kwayi-2. Kwabesifazane, le nkomba ingaphezulu kuka-20%, kanti i-AUC (indawo engaphansi kwejika "isikhathi sokuhlushwa") ingaphansi kwe-10%. Ngobulili nobudala, umehluko kumakhemikhali we-pharmacokinetic awubalulekile futhi ukulungiswa komthamo akudingeki.
Nge-cirrhosis yotshwala yesibindi Tmax (isikhathi sokufinyelela ekugxilweni okuphezulu) siphindwe izikhathi ezingama-16 kunokujwayelekile. Ukudla kancane kunciphisa isikhathi nezinga lokufakwa kwe-atorvastatin (ngo-9% no-25%, ngokulandelana), ngenkathi ukwehla kokuxineka kweLDL-C kuyafana nalokho ne-Atoris ngaphandle kokudla.
I-Atorvastatin ine-bioavailability ephansi (12%), i-bioavailability ye-systemic ye-inhibitory ye-HMG-CoA reductase ingama-30% (ngenxa yesimo se-metabolic membrane se-mucous membrane ye-mucous membrane ye-gastrointestinal kanye nomphumela we "main phase" ngokusebenzisa isibindi).
Vd (umthamo wokusabalalisa) we-atorvastatin average average 381 litres. Ngaphezulu kwama-98% ento ebophele amaprotheni e-plasma. I-Atorvastatin ayingene ekuvinjelweni kwegazi-ingqondo. I-Metabolism yenzeka kakhulu ngaphansi kwethonya le-isoenzyme CYP3A4 cytochrome P450 esibindini. Ngenxa yalokhu, kwakhiwa ama-metabolites asebenza ngamakhemikhali ngokwenziwa (i-para- and orthohydroxylated metabolites, imikhiqizo ye-beta-oxidation), ebanga cishe ama-70% womsebenzi we-inhibitory ngokumelene nokuvuselelwa kwe-HMG-CoA esikhathini esingamahora angama-20-30.
T1/2 (Half-life) ye-atorvastatin ngamahora ayi-14. Igcotshwa ikakhulu nge-bile (ukuphindiselwa kabusha kwamathumbu-hepatic ayivezwanga, nge-hemodialysis ayikhishwa). Cishe i-46% ye-atorvastatin ikhishwa ngaphakathi emathunjini, kungaphansi kwe-2% izinso.
Nge-cirrhosis yotshwala yesibindi (ngokusho kwesigaba se-Child-Pugh - isigaba B), i-atorvastatin ikhuphuka kakhulu (Cmax - cishe izikhathi eziyi-16, i-AUC - cishe izikhathi eziyi-11).
ngaphansi kweminyaka eyi-18
Izifo zesibindi (i-hepatitis engamahlalakhona, i-cirrhosis, ukwehluleka kwesibindi),
ukungabekezelelani kwe-lactose, ukuntuleka kwe-lactase, i-galactose / ushukela malabsorption,
Ngokwemiyalo, i-Atoris kufanele ichazwe ngokuqapha uma kunezifo zesibindi emlandweni kanye nokuncika kotshwala.
Imiyalo yokusebenzisa i-Atoris: indlela nomthamo
Amathebhulethi e-Atoris athathwa ngomlomo ngasikhathi sinye, kungakhathaleki ukuthi kudliwe kanjani.
Ngaphambi nangesikhathi sokwelashwa, indlela yokudla enokuqukethwe okulinganiselwe kwe-lipid kufanele ilandelwe.
I-Atoris ayisetshenziswa ezinganeni, iziguli ezindala zinqunywa i-10 mg kanye ngosuku amasonto ama-4. Uma umphumela wokwelapha ngemuva kwenkambo yokuqala ungabonakali, ngokususelwa kuphrofayili ye-lipid, umthamo wansuku zonke uyanda ube ngu-20-80 mg ngosuku.
Ukusetshenziswa kwe-Atoris kungadala imiphumela emibi eminingana:
ovela ohlelweni lokugaya ukudla: isisulu sokukhubazeka, isicanucanu, ukulahleka kwesifiso, ipancreatitis, ukuphuma kwe-bile, ukuhlanza, i-hepatitis, ubuhlungu esifundeni se-epigastric, i-flatulence,
kusuka ohlelweni lwezinzwa: isiyezi, i-paresthesia, ukuphazamiseka kokuphaphama kanye nohlobo lokulala, i-peropheral neuropathy, ikhanda,
kusuka ohlelweni lwe-musculoskeletal: imisipha, ubuthakathaka bemisipha, i-myopathy, ubuhlungu bemisipha, i-myositis,
ovela ohlelweni lwezinhliziyo: i-arrhythmia, i-palpitations, i-phlebitis, i-vasodilation, umfutho wegazi ophakeme,
ukusabela kwe-allergic: i-alopecia, i-urticaria, ukulunywa, ukuqubuka esikhunjeni, i-edema kaQuincke.
Yini esiza Atoris kusuka? Nikeza umuthi kulezi zimo ezilandelayo:
ekwelashweni kweziguli ezine-primary (uhlobo 2a no-2b) ne-hyperlipidemia exubile.
ukuphathwa kwalesi sidakamizwa kukhonjiswa ezigulini ezine-homozygous hypercholesterolemia ekhuphukile: i-cholesterol iyonke, indawo ephansi yabantu abasebenza njenge-lipoprotein cholesterol, triglyceride noma i-apolipoprotein B.
Imiyalo yokusebenzisa i-Atoris, umthamo
Umuthi uphuzwa ngomlomo, kungakhathalekile ukuthi udliwe yini.
Umthamo wokuqala onconyiwe yithebhulethi eli-1 le-Atoris 10 mg nsuku zonke. Ngokusho kwemiyalo, umthamo wesidakamizwa uyahluka kusuka ku-10 mg uye kuma-80 mg kanye ngosuku, futhi ukhethiwe kucatshangelwa izinga lokuqala le-LDL-C, inhloso yokwelashwa kanye nomphumela ngamunye wokwelapha. Umthamo oqondile womuthi ukhethwa udokotela oholayo, kucatshangelwa imiphumela yokuhlolwa kanye nezinga lokuqala le-cholesterol.
Ekuqaleni kokwelashwa kanye / noma ngesikhathi sokwanda komthamo, kuyadingeka ukuqapha okuqukethwe kwe-lipidma kwe-lipid njalo emavikini angama-2-2 bese ulungisa umthamo ngokufanele.
Ku-primary (heterozygous hereditary and polygenic) hypercholesterolemia (uhlobo IIa) ne-hyperlipidemia exubile (uhlobo IIb), ukwelashwa kuqala ngomthamo wokuqala onconyelwayo, owanda ngemuva kwamaviki ama-4 ngokuya ngempendulo yesiguli. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-80 mg.
Ezigulini esezikhulile neziguli ezinenkinga yezinso ukusebenza, ukulungiswa kwamthamo akudingeki.
Ezigulini ezinenkinga yokusebenza kwesibindi, umuthi ubekwa ngokuqapha maqondana nokuncipha kokuqedwa komuthi emzimbeni.
Ngokwemiyalo esetshenziswayo, ukuqokwa kwe-Atoris kungahle kuhambisane nemiphumela emibi elandelayo:
Ukusuka kwi-psyche: ukudangala, ukuphazamiseka kokulala, kufaka phakathi ukuqwasha nobusuku obunzima.
Kusuka emasosheni omzimba: ukusabela komzimba, i-anaphylaxis (kufaka phakathi ukushaqeka kwe-anaphylactic).
Ukuphazamiseka kwe-Metabolic: hyperglycemia, hypoglycemia, isisindo somzimba, i-anorexia, isifo sikashukela.
Ukusuka ohlelweni lokuzala kanye nezindlala zezinso: ukungasebenzi ngocansi, ukungabi namandla, i-gynecomastia.
Ukusuka ohlelweni lwezinzwa: ikhanda, i-paresthesia, isiyezi, i-hypesthesia, i-dysgeusia, i-amnesia, i-peropheral neuropathy.
Ukusuka ohlelweni lokuphefumula: isifo samaphaphu esimaphakathi, umphimbo obuhlungu kanye ne-larynx, impumulo.
Ukutheleleka nokutheleleka: i-nasopharyngitis, izifo ezithinta umchamo.
Kusuka ohlelweni lwegazi nohlelo lwe-lymphatic: thrombocytopenia.
Kusukela ohlangothini lwesitho sombono: umbono ofiphele, ukonakala okubonakalayo.
Kusuka ohlelweni lwenhliziyo: unhlangothi.
Engxenyeni yesitho sokuzwa: i-tinnitus, ukulahleka kokuzwa.
Ukusuka emgudwini wokugaya ukudla: ukuqunjelwa, ukuthopha, isisu, isicanucanu, uhudo, ukugabha, Ubuhlungu esiswini esingenhla nesiphansi, i-belching, pancreatitis.
Ukusuka ohlelweni lwe-hepatobiliary: i-hepatitis, cholestasis, ukwehluleka kwesibindi.
Engxenyeni yesikhumba nezicubu ezivulekile: i-urticaria, ukuqhuma kwesikhumba, ukulunywa, i-alopecia, i-angioedema, isikhumba esinamandla, kufaka phakathi i-erythema exudative, iStevens-Johnson syndrome, i-necrolysis enobuthi.
Ukusuka ohlelweni lwe-musculoskeletal: i-myalgia, i-arthralgia, izinhlungu emilenzeni, imisipha iminyinyitheka, ukuvuvukala okuhlangene, izinhlungu emuva, izinhlungu zentamo, ubuthakathaka bemisipha, i-myopathy, i-myositis, i-rhabdomyolysis, i-tendonopathy (kwesinye isikhathi ehlanganiswa nokuqhuma kwe-tendon).
Ukuphazamiseka okuvamile: i-malaise, i-asthenia, izinhlungu esifubeni, i-edema yangaphandle, ukukhathala, umkhuhlane.
I-Atoris iphikisiwe emacaleni alandelayo:
ukungabekezelelani komuntu ngamunye ezingxenyeni zezidakamizwa,
malabsorption we-glucose galactose,
isifo sezinso esibuhlungu,
isifo samathambo emthambo,
iminyaka efinyelela kwengu-10.
Ukuqapha kufanele kuthathwe ngokudakwa, isifo sesibindi. Leli qembu lifaka nabantu abasebenza imisebenzi yobungcweti ehlobene nokushayela izimoto nezinqubo eziyinkimbinkimbi.
Uma kwenzeka kweqa ngokweqile, ukwelashwa okubonakalayo nokwesekelayo kufanele kwenziwe. Kuyadingeka ukulawula ukusebenza kwesibindi nomsebenzi we-CPK ku-serum yegazi. I-Hemodialysis ayisebenzi. Ayikho i-antidote ethile.
Ama-analog ama-atoris, inani lentengo emakhemisi
Uma kunesidingo, i-Atoris ingathathelwa indawo nge-analogue yento esebenzayo - lezi izidakamizwa:
Lapho ukhetha ama-analogues, kubalulekile ukuqonda ukuthi imiyalo yokusebenzisa i-Atoris, intengo nokubuyekezwa kwezidakamizwa ezinomphumela ofanayo azisebenzi. Kubalulekile ukuthola ukubonisana nodokotela hhayi ukwenza ushintsho oluzimele lomuthi.
Inani lentengo emakhemisi aseRussia: I-Atoris amaphilisi angu-10 mg 30 ama-pcs. - kusuka kuma-ruble angama-337 kuya kwangama-394, ama-20 mg ama-30pcs - kusuka kuma-ruble angama-474 kuya kwangama-503.
Gcina endaweni yokushisa engeqi ku-25 ° C. Impilo yamashalofu yiminyaka emi-2. Kumakhemisi, kuthengiswa ngomuthi.
Ukubuyekezwa okuhlukahlukene mayelana ne-Atoris, njengoba abaningi bethi izindleko eziphakeme zomuthi zivumelwa ukusebenza kwawo nokubekezelela okuhle. Kuyaphawuleka ukuthi ngesikhathi sokwelashwa, imiyalo kadokotela maqondana nokudla nomsebenzi womzimba kumele ilandelwe, futhi lapho ukhetha futhi ulungisa umthamo, ukugxilwa kwamazinga aphansi we-lipoprotein kufanele kubhekwe. Ngokusho kwabasebenzisi abathile, umuthi awunawo umphumela ofanele wokwelapha futhi awunakubekezelelwa okungahambi kahle, okubangela ukusabela okubi.
Ukubuyekezwa okungu-5 kwe- "Atoris"
ubaba wami ubesethatha i-atoris iminyaka emibili ngaphandle kwekhefu ngemuva kokuhlinzwa kwenhliziyo - akanayo imiphumela emibi, yonke into iyodwa
Umuthi muhle, unomphumela omubi omncane. I-cholesterol yami yayingu-6.2-6.7.
Ngiphuza njalo i-Atoris ngomthamo ka-20 mg. Manje i-cholesterol izinzile kusuka ku-3.5 kuya ku-3.9. Angilandeli ukudla.
Umsizi omuhle ukuqeda ukulimala, noma ngaphandle kwemiphumela emibi futhi akukho ndawo, kodwa cholesterol kufanele iqashelwe.
Ngiphuza amasonto amabili i-Atoris ukuthi kungenzeka yini ukuthi uthathe ikhefu.
Nganqunyelwa umuthi ngenxa ye-ED. Ngiyavuma nsuku zonke, ngizohlolwa izivivinyo maduze. Ukuze kube nokwakhiwa ngokwayo, ngithatha iSildenafil-SZ.
Yini esiza amaphilisi we-Atoris avela? - izinkomba
I-Atoris iboniswa izifo eziningi zohlelo lwe-vascular kanye nezingozi ezihambisana nalokhu:
dyslipidemia, ukuze kuncishiswe ingozi yokuqalwa kwe-myocardial,
ukubonakaliswa okubulalayo kwesifo senhliziyo se-ischemic,
ukuvela kwe-angina pectoris.
Umuthi futhi usetshenziswa ngempumelelo ekwelapheni okuyinkimbinkimbi uma kwenzeka kukhula isifo sikashukela i-mellitus, hyperlipidemia.
I-Atoris analogues, uhlu lwezidakamizwa
I-Atoris analogues yilezi zidakamizwa ezilandelayo:
Okubalulekile - imiyalo yokusebenzisa i-Atoris, intengo nokubuyekezwa ayisebenzi kuma-analogues futhi ayinakusetshenziswa njengesiqondisi sokusetshenziswa kwezidakamizwa zokwakheka okufanayo noma umphumela. Konke ukuqokwa okwelashwa kufanele kwenziwe ngudokotela. Lapho uthatha indawo ye-Atoris nge-analogue, kubalulekile ukubonana nochwepheshe, kungadingeka ukuthi ushintshe inkambo yokwelapha, imithamo, njll. Ungazideli!
Ukubuyekezwa kodokotela ngokusetshenziswa kwe-Atoris empeleni kukuhle - iziguli ziqaphela ukuthuthuka kwesimo sabo sezempilo isikhathi eside, ngisho nangemva kokukhishwa komuthi. Umuthi ungowezidakamizwa ezokwehlisa i-lipid futhi kufanele uthathwe kuphela ngokuyalelwa udokotela.
I-Atoris ikhiqizwa eSlovenia ngesimo samathebulethi anegobolondo okufanele lithathwe ngomlomo. Imithamo ye-Atoris 10, 20, 30 no-40 mg imhlophe futhi imhlophe (ijamo le-oval lifana nemithamo ka-60 no-80 mg, ongatholakali emakethe yaseRussia).
Kumaphakeji wemithamo engama-30 noma engama-90, kanye nemiyalo esemthethweni evunyelwe yokusetshenziswa.
I-Atorvastatin (igama lamanye amazwe - i-Atorvastatin) yisithako esiyisisekelo esisebenzayo ekwelapheni i-Atoris (INN ngesiLatini - Atoris). Lonke ithonya lemiphumela yemithi linikeza indlela yokusebenza ye-Atorvastatin kumithamo ehlukahlukene - 10, 20, 30, 40 mg (imithamo ye-Atoris 60 ne-80 mg ibhalisiwe kwamanye amazwe).
I-Atoris ineqhaza ekunikezelweni kwemiphumela enjalo ye-pharmacological:
Isiza ukunciphisa ukuvela kwegazi, ibuyise inqubo yokujiya kwegazi.
Isiza ukuvimbela ukuqhuma okungenzeka kwama-atherosulinotic plaque.
I-lowers cholesterol-low density lipoproteins, triglycerides.
Khulisa okuqukethwe kwe-high density lipoprotein cholesterol.
Inomphumela we-anti-atherosclerotic - uthinta kahle izindonga zemithambo yegazi.
Umphumela wokwelapha we-Atoris uthuthuka ngemuva kwamasonto ama-2 wokudla njalo amaphilisi, umphumela omkhulu wezidakamizwa - ngemuva kwenyanga eyi-1.
Ngabe i-Atoris ibekelwe ini?
Umuthi uyasiza ezimweni ezilandelayo:
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-Atoris ziyehluka kancane ngokuya ngokuqukethwe okuphezulu kwamathebulethi e-atorvastatin.
I-Atoris 10 mg ne-Atoris 20 mg:
i-hyperlipidemia eyisisekelo yezinhlobo i-IIa ne-IIb ngokwezigaba zikaFredrickson, kufaka phakathi i-polygenic hypercholesterolemia, i-hyperlipidemia, i-heterozygous Famal hypercholesterolemia, ukwehlisa inani le-cholesterol, i-apolipoprotein B, i-cholesterol ye-LDL, i-triglycerides egazini,
i-homozygous hypercholesterolemia yomndeni, ukwehlisa izinga le-cholesterol ephelele, i-apolipoprotein B, i-LDL cholesterol, njengesengezo ekwelashweni kokudla nangezinye izindlela zokwelapha ezingezona izidakamizwa.
I-Atoris 30, 40, 60, 80 mg:
i-hypercholesterolemia (uhlobo olungelona olwomndeni kanye nolwe-heterozygous II hypercholesterolemia ngokusho kwesigaba sikaFredrickson,
i-hyperlipidemia exubekile (ehlangene) yezinhlobo IIa ne-IIb ngokuya ngezigaba zikaFredrickson,
thayipha i-dysbetalipoproteinemia ngokuya ngezigaba zikaFredrickson (njengezokwengeza ekwelashweni kokudla),
uhlobo lomndeni olwa nokudla olungazweli emikhakheni i-IV hypertriglyceridemia ngokuya ngezigaba zikaFredrickson,
i-homozygous hypercholesterolemia yomndeni, njengesengezo ekwelashweni kokudla kanye nezinye izindlela zokwelapha ezingezona izidakamizwa.
Yonke imithamo ye-Atoris inqunyelwe:
ngenhloso yokuvinjelwa okuyinhloko kwe-inhliziyo ye-inhliziyo ezithombeni ngaphandle kokubonakaliswa kwesifo senhliziyo, kepha kungenzeka ukuthi kungakhula ngenxa yezici ezikhona zobungozi, kufaka phakathi ubudala ngemuva kweminyaka engama-55, umfutho we-arterial hypertension, ukuxhomekeka kwe-nicotine, isifo sikashukela, i-cholesterol ephansi ye-plasma ,
ngenhloso yokuvinjwa kwesibili kwe-inhliziyo ye-inhliziyo ezithweni ezinesifo senhliziyo esitholakele, ukunciphisa izinkinga, kufaka phakathi i-myocardial infarction, ukufa kwabantu, unhlangothi, ukulaliswa esibhedlela kabusha okuhambisana ne-angina pectoris kanye nesidingo sokuhlaziya kabusha.
Imiyalo yezokwelapha yokusetshenziswa
Lapho uthatha i-Atoris, isiguli kufanele silandele imigomo eyisisekelo yokudla okwehlisa i-lipid phakathi nayo yonke inkathi yokwelashwa.
Iziguli ezikhuluphele zelulekwa ngalokhu okulandelayo: ngaphambi kokuqala ukusebenzisa i-Atoris, umuntu kufanele azame ukuguqula amazinga e-cholesterol ngokuchayeka kokuzivocavoca okulinganiselayo ngokomzimba kanye nokwelashwa kwesizathu esiyimbangela salesi sifo.
Ngithatha i-Atoris ngaphakathi, noma ngabe ukudla kungakanani. Umthamo wokuqala ngu-10 mg.
Njengoba kudingekile, umthamo ungakhushulelwa ku-80 mg. Umthamo oqondile womuthi ukhethwa udokotela oholayo, kucatshangelwa imiphumela yokuhlolwa kanye nezinga lokuqala le-cholesterol.
Kunconywa isilinganiso esisodwa somuthi esisodwa sosuku, kungcono ngasikhathi sinye. Umthamo akufanele uguqulwe ngaphambi kwenyanga eyi-1 ngemuva kokuqala kokusetshenziswa kwomuthi.
Ngesikhathi sokwelashwa, kuyadingeka ukubheka njalo izinga le-lipids eplasma yegazi. Inqubo kumele yenziwe okungenani kanye njalo emavikini angama-2-4.
Ukulungiswa kwedose kweziguli zamaqembu asebekhulile akudingekile.
I-Atoris isetshenziswa njengengxenye yokusiza yokwelashwa ngokuhlangana nezinye izindlela zokwelapha (plasmapheresis). Umuthi futhi ungasetshenziswa njengengxenye eyinhloko yokwelapha uma ezinye izindlela zokwelapha nezidakamizwa zingenawo umphumela wolwazi odingekayo.
I-Atoris iphikisana nabomama abakhulelwe nababambisayo.
Umuthi ubekelwe abesifazane besikhathi sokuzala kuphela uma amathuba okukhulelwa ephansi kakhulu, futhi isiguli saziswa ngobungozi obungahle bube khona ku-fetus. Abesifazane besikhathi sokuzala kufanele basebenzise izindlela ezanele zokuvimbela inzalo ngesikhathi sokwelashwa. Uma owesifazane ehlela ukukhulelwa, kufanele ayeke ukuthatha i-Atoris okungenani inyanga ngaphambi kokukhulelwa kwakhe okuhleliwe.
Uma kunesidingo, ukuqokwa kwe-Atoris kufanele kunqume ngokuqedwa kokuncelisa ibele.
Ungazithatha kanjani izingane?
Ucwaningo lokusebenza ngempumelelo kwe-Atoris nokuphepha kokusetshenziswa kwalo ezinganeni alwenziwe, lapho amaphilisi e-Atoris aphikiswa khona kuze kube yilapho eneminyaka eyi-18.
Lapho ukhetha ama-analogues, kufanele kukhunjulwe ukuthi imiyalo yokusebenzisa i-Atoris, intengo nokubuyekezwa kwezidakamizwa zalolu hlobo akusebenzi. Ukufakwa kwesinye isidakamizwa kuvunyelwe kuphela ngemuva kokunconywa ngudokotela.
I-Liprimar noma i-Atoris - yikuphi okungcono?
Njengasesimweni ngeTorvacard, i-Liprimar isichazamazwi se-Atoris, okungukuthi, iqukethe into efanayo ne-atorvastatin njengesithako esisebenzayo. Zombili lezi zidakamizwa zinezinkomba ezifanayo, izici zokusebenzisa, i-contraindication, imiphumela emibi, njll.
Imithamo yeLiprimar iphinda imithamo ye-Atoris ngaphandle kwama-30 mg amaphilisi. Umkhiqizi wenkampani uLiprimara - Pfizer (Ireland), uqobo ngokwayo ekhuluma ngekhwalithi ephezulu yomkhiqizo.
Kuyaqapheleka ukuthi i-Liprimar isidakamizwa sokuqala sase-atorvastatin, futhi bonke abanye, kufaka phakathi i-Atoris, ngama-generics ayo.
I-Torvakard noma i-Atoris - okungcono?
Kufanele kwaziwe ukuthi zombili lezi zidakamizwa ziqukethe i-atorvastatin njengesithako esisebenzayo, futhi ngenxa yalokho zinemiphumela efanayo yemithi. I-Atoris ikhiqizwa iKrka (Slovenia), neTorvacard nguZentiva (Czech Republic).
Zombili lezi zinkampani zokukhiqiza zidumile impela futhi zinedumela elihle, okwenza lezi zidakamizwa zicishe zingathandeki. Umehluko kuphela phakathi kweTorvacard umthamo wamathebhulethi ayo, ongungu-40 mg omkhulu, kanti ezinye izimo ze-pathological zidinga imithamo ye-atorvastatin 80 mg, engase ibangele ukuphazamiseka okuthile ekutholeni amaphilisi.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwe-Atoris, isiguli kufanele sinqunywe indlela yokudla ejwayelekile ye-hypocholesterolemic, okufanele siyilandele ngesikhathi sonke sokwelashwa.
Uma usebenzisa i-Atoris, kunganda ukuqaphela komsebenzi we-hepatic transaminase. Lokhu kunyuka kuvame okuncane futhi akunakubaluleka komtholampilo. Noma kunjalo, kuyadingeka ukubheka njalo izinkomba zomsebenzi wesibindi ngaphambi kokwelashwa, amasonto ayi-6 namasonto ayi-12 ngemuva kokuqala komuthi nangemva kokukhulisa umthamo. Ukwelashwa kufanele kuyekwe ngokukhuphuka kwe-AST ne-ALT izikhathi ezingaphezu kwezi-3 ezihlobene ne-VGN.
I-Atorvastatin ingadala ukwanda komsebenzi we-CPK nama-aminotransferase.
Iziguli kufanele zixwayiswe ukuthi kufanele zibonane nodokotela ngokushesha uma kubuhlungu noma buthakathaka kwemisipha engachazeki. Ikakhulu uma lezi zimpawu zihambisana ne-malaise nomkhuhlane.
Ngokulashwa nge-Atoris, ukuthuthukiswa kwe-myopathy kungenzeka, kwesinye isikhathi okuhambisana ne-rhabdomyolysis, okuholela ekwehlulekeni kwe-renal acute. Ubungozi bale nkinga banda ngenkathi uthatha umuthi owodwa noma ngaphezulu wezidakamizwa ezilandelayo nge-Atoris: i-fibrate, i-nicotinic acid, i-cyclosporine, nefazodone, amanye ama-antibiotics, i-azole antifungals, ne-HIV proteinase inhibitors.
Ekubonakalisweni kwemitholampilo kwe-myopathy, kunconywa ukuthi kunqunywe ukugxilwa kwe-plasma ye-CPK. Ngokukhuphuka okuphindwe kabili kwe-VGN komsebenzi we-KFK, ukwelashwa ne-Atoris kufanele kuyekwe.
Kunemibiko yokuqalwa kwe-atonic fasciitis nokusetshenziswa kwe-atorvastatin, noma kunjalo, ukuxhumana nokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kungenzeka, kodwa kuze kube manje akukafakazelwa, i-etiology ayikaziwa.
Akunabufakazi besidakamizwa esiningi.
Uma kwenzeka kusetshenziswa i-overdose, ukwesekelwa nokwelashwa okubonisa izimpawu. Ukuqapha kanye nokunakekelwa kwemisebenzi ebalulekile yomzimba, ukuvimbela ukumuncwa kwe-Atoris (ukuthatha izidakamizwa ngomphumela we-laxative noma i-activated charcoal, i-gastric lavage), ukuqapha umsebenzi wesibindi nomsebenzi we-creatine phosphokinase ku-serum yegazi kuyadingeka.
I-Hemodialysis ayisebenzi. Ayikho i-antidote ethile.
Ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-Atoris (10 mg) nge-diltiazem (ngaphezu kwama-200 mg), ukwanda kokuxineka kwe-Atoris ku-plasma yegazi kungabonakala.
Ingozi yezinkinga ikhuphuka lapho i-Atoris isetshenziswa ngokuhlangana nama-fibrate, i-nicotinic acid, imithi elwa namagciwane, ama-antifungal agents.
Ukusebenza kwe-Atoris kwehla ngokusetshenziswa kanyekanye kweRifampicin nePhenytoin.
Ngokusetshenziswa ngasikhathi sinye ngokulungiswa kwama-antacid, okubandakanya i-aluminium ne-magnesium, ukwehla kokuxineka kwe-Atoris eplasma yegazi kuyabonakala.
Ukuthatha i-Atoris kanye nejusi yamagilebhisi kungakhuphula ukuqina kwesidakamizwa ku-plasma yegazi. Iziguli ezithatha i-Atoris kufanele zikhumbule ukuthi ukuphuza ujusi wegilebhisi ngevolumu engaphezu kwe-1 litre ngosuku akwamukeleki.
Yini ukubuyekezwa okukhulunywa ngakho?
Ukubuyekezwa okuhlukahlukene mayelana ne-Atoris, njengoba abaningi bethi izindleko eziphakeme zomuthi zivumelwa ukusebenza kwawo nokubekezelela okuhle. Kuyaphawuleka ukuthi ngesikhathi sokwelashwa, imiyalo kadokotela maqondana nokudla nomsebenzi womzimba kumele ilandelwe, futhi lapho ukhetha futhi ulungisa umthamo, ukugxilwa kwamazinga aphansi we-lipoprotein kufanele kubhekwe.
Ngokusho kwabasebenzisi abathile, umuthi awunawo umphumela ofanele wokwelapha futhi awunakubekezelelwa okungahambi kahle, okubangela ukusabela okubi.
Kukhona ukubuyekezwa okuhlukahlukene kwe-Atoris. Abaningi baphawula ukuthi izindleko eziphakeme zomuthi zivumelwa ukusebenza kwawo nokubekezelela okuhle. Kuyaphawuleka ukuthi ngesikhathi sokwelashwa, imiyalo kadokotela maqondana nokudla nomsebenzi womzimba kumele ilandelwe, futhi lapho ukhetha futhi ulungisa umthamo, ukugxilwa kwamazinga aphansi we-lipoprotein kufanele kubhekwe. Ngokusho kwabanye abasebenzisi, i-Atoris ayinawo umphumela wokwelapha ofunekayo futhi awunakubekezelela okungahambi kahle, okubangela ukusabela okubi kakhulu.
Ngabe umuthi usebenza kanjani?
Ngesisekelo sento esebenzayo ye-atorvastatin, isidakamizwa i-Atoris senziwa. Yini esiza? Yehlisa inani lama-lipid egazini. Ngenxa yesenzo se-atorvastatin, umsebenzi we-GMA reductase uyancipha futhi ukuhlanganiswa kwe-cholesterol kuvinjelwe. Inani lamanani wokugcina we-plasma lehliswa kakhulu ngenxa yokwanda kwenani lama-receptors kumaseli wesibindi kanye nokwenyuka kokubopha kwe-lipoprotein.
I- "Atoris" nayo inomphumela wokubulala izinzwa emithanjeni yegazi. Umuthi osebenzayo uvimbela ukwenziwa kwama-isoprenoids. IVasodilation nayo iyathuthuka. Njengomthetho, imiphumela yokuqala ingatholwa ngemuva kokubanjwa kwamasonto amabili. Futhi ngemuva kwamasonto amane, umphumela omkhulu wenzeka.
Cishe i-80% yento esebenzayo igxila emgodini wokugaya ukudla. Ngemuva kwamahora ama-2, ukuqoqwa kwe-atorvastatin emzimbeni kufinyelela uphawu lwayo oluphezulu. Kuyaqapheleka ukuthi kwabesifazane lesi sibalo siphakeme ngo-20% kunabesilisa. Umsebenzi we-inhibitory uhlala amahora angama-30. Kepha ukuqedwa komuthi kuqala ngemuva kwamahora ayi-14. Isabelo esikhulu sidalulwa ku-bile. Ama-40-46% asele ashiya umzimba ungene emathunjini nase-urethra.
Ezimweni eziningi, odokotela banquma ukunquma umuthi onjenge-Atoris. Izinkomba zokusetshenziswa kwaso yilezi ezilandelayo:
izifo zenhliziyo nezemithambo okubangelwa yi-dyslipidemia,
ukuvimbela izifo zenhliziyo ezi-coronary, ukushaya kwenhliziyo ne-angina pectoris,
ukuvimbela kwesibili kwemiphumela engathandeki yesifo senhliziyo.
Akuzona zonke iziguli ezingasebenzisa amaphilisi we-Atoris. Ukuxhumanisa kungokulandelayo:
Izifo zesibindi ezingamahlalakhona ezisezingeni lokuba zande,
ukukhuphuka kwe-hepatic transaminases,
ukuzwela engxenyeni esebenzayo noma ukusabela komzimba kuyo,
izifo zesistimu yemisipha
i-lactase ukungabekezeleli noma ukusilela kwayo,
isifo sezinso esibuhlungu
Ngokuqapha ngokweqile, umuthi ubekelwe iziguli ezinalezi zifo:
kuphikiswe ukuphazamiseka esele kwe-electrolyte,
ukungenelela okukhulu kokuhlinzwa,
ukulimala okungathi sína.
Ungawuthatha kanjani umuthi
Ukuze uzuze umphumela omenyezelwe, kubalulekile ukuthatha i- "Atoris" kahle. Umyalo uqukethe imininingwane enjalo:
Izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuqala kokuthatha umuthi, isiguli kufanele sidluliselwe ekudleni, okusho ukwehla kwenani lama-lipids. Lokhu kudla kufanele kulandelwe kuyo yonke inkathi yokwelashwa.
Amathebhulethi e-atoris athathwa ngaphandle kwesimiso sokudla.
Ngokuya kwenqwaba yokuqala ye-LDL-C enqunywe yimiphumela yokuhlaziya, kungabekwa i-10-80 mg yesidakamizwa ngosuku. Le mali isetshenziswa ngasikhathi sinye.
Kunconywa ukusebenzisa umuthi "Atoris" nsuku zonke ngasikhathi sinye.
Ukushintsha umthamo akunconywa ngaphambi kwamaviki ama-4 ngemuva kokuqala komuthi. Kungemva kwalesi sikhathi kuphela lapho singakwazi ukuhlola kahle umphumela wokwelapha futhi silungise ukwelashwa.
Ezigulini ungezwa imibono ehlukahlukene yokuthi uthatha i-Atoris isikhathi esingakanani. Ochwepheshe bathi uma kunengozi yokuhlaselwa yinhliziyo, khona-ke umuthi kufanele uphuzwe ngokuqhubekayo (okungukuthi, impilo yonke). Ngasikhathi sinye, akukhuthazwa ukuthatha ikhefu, ngoba izidakamizwa ezenziwa nge-atorvastatin azihloselwe ukuphathwa kwe-course. Noma ngabe zinemiphumela emibi ngohlobo lokuphazamiseka komzimba, kufanele wenze ukukhetha phakathi kokunethezeka nesikhathi sokuphila. Ukwehliswa komthamo noma ukuhoxisa kungenzeka kuphela uma imiphumela emibi ingabekezeleleki.
Ezinye iziguli zenza imisebenzi yama-amateur futhi zithatha izidakamizwa ezenziwa nge-atorvastatin zonke ezinye izinsuku. Lokhu kungabizwa ngokuthi "ulutho lobuciko babantu". Uma udokotela ekucebisa uhlelo olunjalo, kufanelekile ukungabaza ikhono lakhe. Azikho izifundo zomtholampilo ezizofakazela ukuphumelela kohlelo olunjalo lokuphathwa kwezidakamizwa olwenziwe.
Umuthi we-Atoris: imiphumela emibi
Naphezu kwazo zonke izinzuzo zomuthi okukhulunywa ngazo, kwezinye izimo kunokuwohloka kwenhlala-kahle. Ngakho-ke, ngaphansi kokubhekelwa eduze kukadokotela, kunconywa ukuthatha i-Atoris. Imiphumela emibi ingaba njengokulandelayo:
Kwesinye isikhathi uhlelo lwezinzwa luphendula ngokuthatha lo muthi ngokuqwasha nesiyezi. I-Asthenia, ikhanda nokuqina okungokomzwelo kuyenzeka. Kuqabukela kakhulu ukozela, ukukhubazeka kwenkumbulo, ukudangala nokufelwa.
Imiphumela emibi nayo ingavela kwizitho zomzimba. I-Tinnitus kanye nokulahleka kokuzwa okuyingxenye, amehlo awomile, ukuqonda okuhlanekezelwe kokunambitheka, noma ukulahleka okuphelele kwemizwa yokunambitheka kwesinye isikhathi kuyaphawulwa.
I-Atoris ingadala izinkinga ngohlelo lwethambo nenhliziyo. Ukubuyekezwa kweziguli kunemininingwane ephathelene nobuhlungu esifubeni, i-palpitations yenhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, i-arrhythmias, i-angina pectoris. I-anemia kungenzeka.
Ngenkathi udla umuthi, uhlelo lokuphefumula luba sengozini enkulu. Umuthi ungavusa i-pneumonia, i-rhinitis, ukuhlaselwa i-asthma. Ama-nosebleeds ajwayelekile nawo kungenzeka.
Imiphumela emibi eminingi ibonwa ohlelweni lokugaya ukudla. Iziguli zivame ukubika ukushisa kwenhliziyo kanye nesisu, isicanucanu, isisu, ukuthopha. Umuthi ungadala ukwanda okukhulu kwesifiso sokudla noma ukungabikho kwayo. Mhlawumbe ukwakheka kwezilonda, i-gastritis, i-pancreatitis. Ezimweni ezingavamile, ukuphuma kwe-rectal kuyaphawulwa.
Ngokusetshenziswa isikhathi eside kwalesi sidakamizwa okukhulunywa ngaso, izinkinga ngohlelo lwe-musculoskeletal zingavela. Imvamisa, iziguli zibika ukugcwala, i-myositis, isifo samathambo kanye ne-hypertonicity yemisipha.
Isistimu ye-genitourinary yandisa ingozi yezifo ezithathelwanayo, izinkinga ngokuchama (ukubambezeleka noma i-enuresis), i-nephritis, umsebenzi wezocansi okhubazekile, ukopha kowesifazane.
Iziguli ezithatha amaphilisi e-Atoris isikhathi eside zinanzelela ukulahleka kwezinwele nokukhuphuka kokujuluka. Imiphumela emibi engaba yimbi ngendlela yokulunywa kwesikhumba, imichilo, i-urticaria.Akutholakali kakhulu ukuvuvukala kobuso.
Ngenkathi uthatha umuthi, ukwanda okuncane kwesisindo somzimba kungenzeka.
Umuthi "Atoris": ama-analogues
Umuthi okukhulunywa ngawo unokufakwa okuningi okufana nalokho emzimbeni. Ngokuya ngomkhiqizi, intengo ingaba phezulu noma iphansi kune-Atoris. Ama-analog afana nalokhu:
I "Torvacard" - njengomuthi okukhulunywa ngawo, uqukethe into esebenzayo efana ne-atorvastatin. Ngaphandle kokuthi icishe ibe yi-analogue ephelele, umphumela wokwelapha wokuphatha kwawo uphakeme kancane. Kepha kuzobiza cishe kabili uma kubiza ngaphezu kwethuluzi okukhulunywa ngalo.
I-Liprimar iyi-analogue ephelele ye-Atoris. Lokhu kungabonwa kuphela ekwakhiweni kwamakhemikhali, kodwa nasezinkombeni, ekubhekaneni ne-contraindication kanye nasempilweni womtholampilo.
"Isoni" - futhi i-analogue ephelele yomuthi okukhulunywa ngawo. Njengoba kungekho ocwaningwe okwenziwe maqondana nokuphepha kanye nokusebenza kahle kwezindlela zokwelashwa ezinganeni, kunqunyelwe abadala kuphela.
"I-Rosuvastatin" isidakamizwa sokugcina sezizukulwane. Isebenza kakhulu kune-atorvastatin, futhi futhi inemiphumela emibi emincane.
I-"Torvakard" iyi-analogue ecishe ibe ephelele ye "Atoris". Lokhu akusho ukuthi iyiphi yezidakamizwa ezingcono. Kubalulekile ukuthi zombili lezi zinto zikhiqizwe yizinkampani zemithi eziphindaphindayo.
"I-Simvastitatin" isidakamizwa sesizukulwane esedlule. Njengomthetho, odokotela cishe abayikhiphi, ngoba ayisebenzi kangako kune-Atoris futhi ayihlanganisi kahle nezinye izidakamizwa. Ngokuyisisekelo, kuthathwa ngabantu abelashwa isikhathi eside, kanye nabalandela izidakamizwa ngokwemvelo.
Ukubuyekezwa kweziguli kuzosiza ekuhloleni ukusebenza kwezidakamizwa ze-Atoris. Kubo ungezwa imibono enjalo:
cishe inyanga ngemuva kokuqala umuthi, izinga le-cholesterol lehliswa kakhulu futhi lazinza,
ayikho imiphumela emibi ebekiwe,
intengo engabizi kakhulu ngokuqhathaniswa nezinye iziphikiso,
umuthi ukhiqizwa yinkampani ehlonishwayo, futhi ngenxa yalokho ungaqiniseka ukuthi ukukhiqizwa kuyalawulwa, futhi ikhwalithi ihlangabezana nezindinganiso zaseYurophu.
Kuphela umuthi kadokotela onga thatha umuthi "Atoris". Ukubuyekezwa kweziguli kuzosiza ukuqonda izici ezingezinhle zokwelashwa ngaleli thuluzi:
ngemuva kokudla umuthi, izicubu zami zaqina kakhulu,
ngemuva kokuyekiswa komuthi, i-cholesterol ikhuphuka ngokushesha ngokwanele (ngaphezu kwalokho, inkomba iphakeme kakhulu kunangaphambi kokwelashwa),
ukukhathala kukhuphuka kakhulu ngenkathi uphuza umuthi,
Ukuqashwa njalo ngudokotela kuyadingeka.
I-Atoris ingesinye sezidakamizwa eziningi ezisuselwa ku-atorvastatin eklanyelwe ukwehlisa i-cholesterol yegazi. Ngaphezu kwalokho, isebenza ngokubekwa kwezinto ezinobungozi ezikwazi ukubutha ngaphambili. Zonke izidakamizwa ezintsha zaleli qembu zivela emakethe, zincintisana ngentshiseko nomunye. Kunoma ikuphi, udokotela kufanele akhethe umuthi.
Amathebhulethi e-Atoris, imiyalo esetshenziswayo (Indlela nomthamo)
Imiyalo yokusebenzisa i-Atoris itusa ukuthi ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngokusetshenziswa kwayo, dlulisela isiguli kuye ukudlaozohlinzeka ukwehliswa kwe-lipid egazini. Ukudla kufanele kulandelwe kuso sonke isikhathi sokwelashwa. Ngaphambi kokuthi uqale ukuthatha i-Atoris, kufanele uzame ukufeza ukulawula hypercholesterolemiangokwenza ukuzivocavoca futhi ukunciphisa umzimba ezigulini ezikhuluphele nangokwelashwa isifo esiyimbangela.
I-Atoris amaphilisi athathwa ngomlomo (ngomlomo), ngemuva kokudla noma ngesisu esingenalutho. Kunconywa ukuthi uqale ukwelashwa ngethamo elilodwa lansuku zonke le-10 mg, emva kwalokho, kuye ngokusebenza komthamo wokuqala futhi uma kunesidingo sokuwenyusa, kunqunywa umthamo ophakeme - 20 mg, 40 mg, njalonjalo kuze kufike ku-80 mg. Umuthi we-Atoris, kumthamo ngamunye, uthathwa kanye ngosuku, ngasikhathi sinye sosuku, ulungele isiguli. Umphumela wokwelapha ubonwa ngemuva kokusebenzisa umuthi amasonto amabili, ngokuthuthukiswa kokusebenza kwawo okuphezulu ngemuva kwamasonto amane. Kulokhu, ukulungiswa komthamo kwe-Atoris kwenziwa hhayi ngaphambi kokuthatha isikhathi esingangemaviki amane, kucatshangelwa izinga lokuphumelela komthamo owedlule. Umthamo omkhulu wansuku zonke we-Atoris ongama-80 mg.
Okwelapha i-hyperlipidemia exubekile Uhlobo lwe-IIb futhi okuyisisekelo(i-polygenicfuthi ifa elihlangene) hypercholesterolemiaUhlobo IIa, batusa ukuthatha i-Atoris ngethamo le-10 mg, ngokukhuphuka komthamo ngemuva komthamo wamasonto amane, kuya ngokusebenza komthamo wokuqala nokuzwela komuntu ngamunye kwesiguli ngasinye.
Ukwelashwa ifa leHomozygous hypercholesterolemia, ngokuya ngobukhulu bokubonakaliswa kwayo, ukukhethwa komthamo wokuqala kwenziwa ngakunye, ebangeni njengakwezinye izinhlobo i-hyperlipidemia.
Ezigulini eziningi ezine ifa leHomozygous hypercholesterolemia ukusebenza kahle kwe-Atoris kubonwa kumthamo owodwa wosuku we-80 mg.
I-Atoris ichazwa njengokwelashwa okwengeziwe kwezinye izindlela zokwelapha (ngokwesibonelo, plasmapheresis) noma njengendlela yokwelapha eyinhloko, uma kungenakwenzeka ukuqhuba ukwelashwa ngezinye izindlela.
Iziguli ezine-pathologies yezinso nasekugugeni asidingi ukulungiswa komthamo umuthi.
Ukugula izifo zesibindi ukuqokwa kwe-Atoris kungenzeka ngokuqapha ngokweqile, ngoba kulokhu kunokwehla kokuqothula atorvastatin ngaphandle komzimba. Ukwelashwa kwenziwa ngaphansi kokulawulwa kwezinkomba zaselebhu nezomtholampilo futhi esimweni sokwanda okukhulu amazinga we-transaminase ngokuncishiswa komthamo noma ngokuhoxiswa ngokuphelele komuthi.
Ukusetshenziswa ngasikhathi sinye atorvastatinngama-antibiotics (Clarithromycin, I-Erythromycin, I-Quinupristine / dalfopristine), NefazodonI-HIV proteinase inhibitors (I-Ritonavir, Indinavir), izidakamizwa ze-antifungal (I-Ketoconazole, I-Itraconazole, I-Fluconazole) noma ICyclosporinekungaholela ekwandeni kwamazinga wegazi atorvastatinfuthi imbangela myopathiesnangaphezulu rhabdomyolysisnentuthuko ukwehluleka kwezinso.
Ukusetshenziswa okufanayo kwe-Atoris ne i-nicotinic acid futhi imicuku-lipid okwehlisa imithamo (ngaphezu kwe-1 g / ngosuku), kanye no-40 mg atorvastatinno-240 mg Diltiazemafuthi kuholele ekwandeni kokuhlushwa kwegazi atorvastatin.
Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe kwe-Atoris ne I-Rifampicinfuthi Phenytoinkwehlisa ukusebenza kwawo.
Ama-antacid(ukumiswa i-aluminium hydroxides futhi i-magnesium) yehlisa okuqukethwe atorvastatinegazini.
Kuhlanganisa i-Atoris ne Colestipolfuthi kwehlisa ukuhlushwa atorvastatinegazini ngamaphesenti angama-25, kepha inomphumela omkhulu wokwelapha, uma uqhathanisa ne-Atoris kuphela.
Ngenxa yengozi eyandayo yokwehla kwamazinga e-hormone ama-endo native, ukuqaphela kuyadingeka ngenkathi kunquma i-Atoris ngezidakamizwa ezokwehlisa izinga lamahomoni endo native (kufaka phakathi I-Spironolactone, I-Ketoconazole, I-Cimetidine).
Iziguli zithola i-Atoris ngasikhathi sinye ku-80 mg kanye I-Digoxinkufanele ibe ngaphansi kokuqashwa njalo, njengoba le nhlanganisela iholela ekwandeni kokuhlushwa kwegazi I-Digoxin, cishe i-20%.
Atorvastatinkungakhuthaza ukumuncwa izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo (Ethinyl estradiol, I-Norethindrone) futhi, ngokufanele, ukugxilwa kwabo ku-plasma, okungahle kudinge ukuqokwa komunye umsebenzi wokuvimbela inzalo.
Ukusetshenziswa okuhlangene kwe-Atoris ne I-Warfarin, ekuqaleni kokusetshenziswa, kungakhuthaza umphumela wokugcina maqondana nokuhlangana kwegazi (ukwehla kwe-PV). Lo mphumela ususuliwe ngemuva kwezinsuku eziyi-15 zokwelashwa okuhlangene.
Atorvastatinayinawo umphumela obalulekile emtholampilo kuma-kinetics Terfenadine futhi IPhenazone.
Ukusetshenziswa okufanayo kwe-10 mg I-Amlodipineno-80 mg atorvastatinakuholeli ekushintsheni kuma-pharmacokinetics okugcina ngokulingana.
Amacala wokubumba ayachazwa. rhabdomyolysisezigulini ezazithatha kanyekanye i-Atoris futhi i-fusidic acid.
Isicelo se-Atoris nge estrogenfuthi izidakamizwa ze-antihypertensive, ngaphakathi kohlaka lokwelashwa okufakwa esikhundleni, azange ziveze izimpawu zokusebenzisana okungafuneki.
Ijusi lamagilebhisi, enanini lamalitha ayi-1,2 ngosuku, ngesikhathi sokwelashwa ne-Atoris kungaholela ekwenyukeni kokuqukethwe kwe-plasma yomuthi, futhi ngenxa yalokho, ukusetshenziswa kwawo kufanele kukhawulelwe.
Ama-analog ama-atoris amelelwa izidakamizwa eziseduze kwaso ekusebenzeni kwawo kwento. Ama-analogues ajwayelekile kakhulu yilawa:
Intengo ye-analogues ihluke kakhulu futhi kuya ngomkhiqizi, okuqukethwe kwesithako esisebenzayo nenombolo yamathebulethi. Ngakho-ke amaphilisi SimvastatinI-10 mg No. 28 ingathengwa ngama-ruble angama-250-300, futhi CrestorI-10 mg No. 28 yama-ruble ayi-1500-1700.
Intengo ye-Atoris, lapho ungathenga khona
Kumakhemisi aseRussia, izindleko zomuthi ziyehluka kakhulu, ngokwesibonelo, intengo ka-Atoris 10 mg No. 30 ingahluka phakathi kwama-ruble angama-400-600, intengo ye-Atoris 20 mg No. 30 kusuka kuma-ruble angama-450 kuya kwangama-1000, amaphilisi angama-40 mg ayi-30 ukusuka kuma-ruble angama-500 kuya kwangama-1000.
Ungathenga amaphilisi e-Ukraine ngokwesilinganiso: 10 mg No. 30 - 140 hryvnia, 20 mg No. 30 - 180 hryvnia, 60 mg No. 30 - 300 hryvnia.